Kungani ukwelashwa kwamanzi angcolile kubaluleke kangaka? -Izindaba zezimboni-iShenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd
Kungani ukwelashwa kwamanzi amdaka kubaluleke kangaka?
Isikhathi: 2020-06-04 Hits: 57
Ngokusho komthombo wokukhucululwa kwendle, ukwelashwa kwendle okuhlala ngokufuthi kuhlukaniswa ngokuphathwa kokukhucululwa kwendle kanye nokwelashwa kwendle okufuywayo. Ngaphezu kwalokho, ingahlukaniswa ngokuya ngohlobo lokuthuthwa kwendle. Ungukungcola kwendalo nokungcola okwenziwe ngumuntu.
Imvamisa lokhu kugaya kwendle kuqukethe izinto eziningi eziyingozi, ezinjengezinsimbi ezisindayo, ama-microorganisms we-pathogenic, amakhemikhali wezinto eziphilayo nokunye. Uma amanzi angcolile engaphathwa ngaphambi kokuba akhishwe, angcolisa kakhulu imvelo yemvelo abantu ancike kuyo.
Ngokujwayelekile, lapho imvelo nezinsizakalo zibhujiswa kanye nokulingana kwemvelo kungalingani, kunzima ukululama futhi kwesinye isikhathi ngeke kutholakale kungakapheli iminyaka eyishumi, amashumi eminyaka, noma amakhulu eminyaka.
Ngakho-ke, noma yiliphi ibhizinisi elizama ukudela imvelo nezinsizakusebenza ngenxa yokuthuthuka kwezomnotho okwesikhashana ngeke ligcine nje lingabekezelelwa ngumthetho kazwelonke, kodwa futhi lizonciphisa ukusinda nentuthuko yebhizinisi.
Kunezindlela eziningi zokwelapha indle, ezingafingqwa njengendlela engokomzimba, indlela yamakhemikhali kanye nendlela yokuphilayo, njll.
I-MBR ubuchwepheshe bokulashwa kwemfucuza ingenye yobuchwepheshe obusetshenziswa kakhulu eminyakeni yamuva. Ukusetshenziswa kwe-MBR membrane bioreactor kungahlanzwa kahle kwendle futhi kufezekise inhloso yokuphinda kusetshenziswe kabusha imithombo yamanzi.
Okwedlule: Ungakusebenzisa kanjani ukuphathwa kwezesayensi kwezemvelo?
Okulandelayo: Kunzima ukwelapha ukuthuthwa kwendle esibhedlela? I-SH Technology ihlole indlela yayo